स्वास्थ्य – AB Sansar
शिशिर भण्डारीलाई एक्कासी के भयो ? उनको स्वास्थ्य अवस्था अहिले यस्तो छ, भावुक हुँदै श्रीमती रोईन्
July 26, 2021 santoshLeaveaComment on शिशिर भण्डारीलाई एक्कासी के भयो ? उनको स्वास्थ्य अवस्था अहिले यस्तो छ, भावुक हुँदै श्रीमती रोईन्
कलाकार तथा सँचारकर्मी शिशिर भण्डारी एक्कासी बिरामी परेका छन् । हिजो उनले सामाजिक सन्जालमा राखेका केहि तस्विरहरुले उनी अस्वस्थ रहेको खबर बाहिरिएपछि शिशिरलाई शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै धेरैले शुभकामना दिए । शिशिरको फेसबुक टिकटकमा के भएको हो भनी धेरैले जिज्ञासा व्यक्त गरे । बिपि प्रतिस्ठानको हस्पिटलको बेडबाट उनले फोटो राखेका थिए । यसैबिच शिशिर […]
July 25, 2021 santoshLeaveaComment on नेपालमै हुने भयो हास्य कलाकार ‘चम्सुरी’को मिर्गाैला प्रत्यारोपण , कसले दिदैछ चम्सुरीलाई मिर्गाैला?
काठमाडौंको महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत हास्य कलाकार पल्पसा डंगोल (चम्सुरी) ले मिर्गाैला प्रत्यारोपण गर्न पाउने भएकी छन्। उनका भाइ राजु डंगोलका अनुसार परिवारभित्र पर्ने चार–पाँच जना मिर्गाैला दिन राजी भइसकेका छन्। उनीहरूको स्वास्थ्य, ब्लड ग्रुपलगायत स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेको छ। सुरुमा मिर्गाैला प्रत्यारोपणका लागि उनलाई भारत लाने तयारी गरिएको थियो। नेपालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न हाडनाताभित्रका […]
नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने ५२ व्यावसायिक फर्ममाथि कारवाहीl
July 21, 2021 santoshLeaveaComment on नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने ५२ व्यावसायिक फर्ममाथि कारवाहीl
मोरङ। नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने, बढी मूल्य लिने, र उपभोग्य मिति समाप्त भएर पनि विक्री वितरण गर्दैआएका ५२ व्यावसायिक फर्म कारबाहीमा परेका छन् । वाणिज्य, आपूिर्त तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २०२ व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरिएकामा सो सङ्ख्याका फर्ममा कारवाही गरिएको जानकारी दिइयो । तीमध्ये विराटनगरस्थित जैसानी […]
को#रो#नाको औ#ष#धीले काम गर्न थाल्यो, २ दिनमै को#रो#ना चैट, १०० प्रतिशत ग्यारेन्टी ।।
May 7, 2021 santoshLeaveaComment on को#रो#नाको औ#ष#धीले काम गर्न थाल्यो, २ दिनमै को#रो#ना चैट, १०० प्रतिशत ग्यारेन्टी ।।
..वैदेशिक रोजगारीमा रहेका धेरै युवाहरुको घर उजाडीएको उदाहरण देखिएका छन् । युवकहरु खाडी मुलुकमा पसिना बगाएर काम गरिरहेका हुन्छन् । तर सन्तान लिएर गाउँमै बसेका श्रीमती भने पारिवारिक दवाव, सामाजिक अपहेलनाका कारण गलत बाटो अपनाएका थुप्रै उदाहरण छन् । कतिपय महिला आफ्नै स्वार्थले परिवार र श्रीमान छोडेर छुट्टै बाटो लागेको पनि देखिएको छ । यहाँ […]
मानिस दुब्लो किन हुन्छ ? केही सत्य-तथ्य कारणहरु जानिराखौ
November 26, 2020 November 26, 2020 santoshLeaveaComment on मानिस दुब्लो किन हुन्छ ? केही सत्य-तथ्य कारणहरु जानिराखौ
मानिस कोही दुब्लो कोही मोटा हुने गर्छ । यसलाई सामान्य मान्न सकिन्छ । यो किशोरावस्थामा पुग्दा हुने परिवर्तनको नतिजा हो । मानिस दुब्लाउनुको पहिलो कारण खाना नै हो । खानामा पौष्टिक तत्वको कमी, अरुची, समयमा या लामो समयसम्म नखाने वा पेटभर नखाने, डाइटिङ्ग गर्ने जस्ता कारण दुब्लो र ख्याउटे बन्नसक्छ । विशेषगरी भन्नुपर्दा इनर्जी धेरै […]
November 21, 2020 santoshLeaveaComment on गर्भपतन के हो ? यसले बाँझोपनको समस्या आउँछ ?
मेरी गर्लफ्रेन्डले दुईपटक दुई महिनासम्मको गर्भपतन गराएको थाहा पाएँ । के अब उनबाट सन्तान हुनसक्दैन ? यसले भविष्यमा आमा र शिशुको स्वास्थ्यमा कुनै असर गर्छ कि गर्भपतनको असर गर्भको शिशु (भू्रण) बाँच्न सक्ने अवस्थामा पुग्नुभन्दा पहिले नै गर्भावस्थाको अन्त्य हुनुलाई नै गर्भपतन भनिन्छ । सामान्य अवस्थामा यस्तै २४ हप्तासम्मको गर्भको अवस्थालाई शिशु बाँच्न सक्ने अवस्था मानिएको छ ।विकसित देशहरूमा त्यसभन्दा केही […]